Marka Tijaabada Habboon ee Imtixaanka Uurka la Qaado mar dambe
Kiniinka ka hortagga uurka: faa'iidooyinka iyo khasaaraha
Hortagga uurka ee waxtar ugu wada shaqayntii aan joogto ahayn
Strepsils muddada uurka
Kahor intaadan bilaabin, aqri talooyinkayaga ku saabsan Kahor Isticmaalka Kiniinka. Hubso: Uurkaagu wuxuu ku jiraa 13ka toddobaad ee ugu horreeya 91 maalmood Waxaad dib u eegis ku sameysay dhamaanteen tixgelinta iyo talo guud. Waxaad leedahay a qorshaha amniga diyaar u ah xaalad dhif ah ee deg-degga ah. Tilmaamaha Ilmo soo rididda ee Mifepristone iyo Misoprostol Ilmo iska soo ridid ka mid ah mifepristone iyo misoprostol, waxaad u baahan doontaa inaad qaadato hal mg oo kiniin ah mifepristone iyo afar ilaa siddeed mcg kaniin oo ah misoprostol.
Waxa kale oo aad u baahan doontaa inaad haysatid xanuun baabi'iye xanuun, sida ibuprofen, si looga caawiyo maaraynta xanuunka. Acetaminophen iyo paracetamol uma shaqeeyaan xanuunka inta lagu jiro ilmo soo rididda sidaas darteed laguma talinayo.
Waa tan sida loo mifepristone iyo misoprostol loo qaado si loo joojiyo uurka: Talaabada 1aad: Ku liq hal kiniin ah mg oo ah 'mifepristone' biyo. Talaabada 2aad: Sug saacadood. Talaabada 3aad: Dhig 4 kiniin oo misoprostol ah mcg midkiiba carrabka hoostiisa oo halkaa ku hay 30 daqiiqo markay kala baxayaan. Waa inaadan hadlin ama wax cunin kan daqiiqadood, marka way fiicantahay inaad meel uun xasilloonid oo aan lagugu qasin.
Tani sidoo kale waa wakhti fiican oo la qaato xanuun baabi'iye sida ibuprofen, maadaama casiraadku dhaqso u bilaaban doonto. Waa inaad kubilaabataa dhiig baxa iyo casiraadda 3 saacadood gudahood markaad isticmaasho 4 kaniini ee misoprostol. Talaabada 4aad: 24 saacadood ka dib qaadashada 4 kaniini ee misoprostol, haddii aadan dhiig billaabin, ama haddii aadan hubin in ilmo soo rididdu shaqaysay, carrabkaaga hoos dhig 4 kaniini oo kale oo ah misoprostol. Halkaas ku hay 30 daqiiqo markay kala baxayaan.
Tixgelinnada Kale ee Ilmo Soo rididda Mifepristone iyo Misoprostol: Baro waxa lafilayo kadib qaadashada mifepristone iyo misoprostol halkan. Haddii aad la kulanto casiraad xun, ibuprofen waa daawo wanaagsan oo lagula tacaalo xanuunka. Waxaad ka iibsan kartaa ibuprofen mg xoog miisaanka warqad dhakhtar la'aan inta badan wadamada.
Qaado kiniinno ah mg midkiiba saacadood kasta. Haddii aad u baahan tahay wax dheeraad ah oo ka mid ah xanuun joojinta, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa 2 kaniini oo ah Tylenol mg saacadood kasta. Haddii aad ka walaacsan tahay habka soo rididda ilmaha oo aad u baahan tahay taageero dheeri ah, waxaad kala xiriiri kartaa saaxiibbadayada www.
Haddii aad isticmaashay kaniiniyada ilmo iska soo ridka mifepristone iyo misoprostol, waxaa laga yaabaa inaadan u baahnayn inaad booqato bixiye daryeel caafimaad booqasho dabagal ah.
Daawooyinkani waa kuwo wax ku ool ah sidaa darteed Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa kugula taliyay inaad u baahan tahay inaad dabagal ku sameyso kaliya haddii: Waxaad dareemeysaa jirro, ama xanuunkaagu ma soo fiicnaanayo 2 ama 3 maalmood kadib. Haddii tani dhacdo, raadso daryeel caafimaad isla markaaba. Weli waxaad dareemaysaa astaamaha uurka laba toddobaad ka dib qaadashada kiniinka ilmo iska soo rididda. Dhiigbaxaagu waa culus yahay oo ma khafiifayo ka dib 2 toddobaad. Haddii mifepristone aan laga heli karin goobtaada, waxaad isticmaali kartaa misoprostol kaligaa si aad u joojiso uurka.
Ilmo soo rididda oo keliya misoprostol, waxaad u baahan doontaa inaad qaadato laba iyo toban mcg kaniin oo ah misoprostol. Acetaminophen iyo paracetamol uma shaqeeyaan si ay u maareeyaan xanuunka inta lagu jiro ilmo soo rididda sidaas darteed laguma talinayo. Waa tan sida loo isticmaalo 'misoprostol' kaligaa si loo joojiyo uurka: Talaabada 1aad: Dhig 4 kiniin oo misoprostol ah mcg midkiiba carrabka hoostiisa oo halkaa ku hay 30 daqiiqo markay kala baxayaan.
Talaabada 2aad: Sug 3 saacadood. Talaabada 3aad: Dhig 4 xabbo oo kale oo misoprostol ah mcg carrabkaaga hoostiisa halkaasna ku hay 30 daqiiqo illaa ay ka milmaan Talaabada 4aad: Sug 3 saacadood oo kale. Talaabada 5aad: Dhig 4 kaniin oo kale ah misoprostol mcg carrabkaaga hoostiisa halkaasna ku hay 30 daqiiqo illaa ay ka milmaan.
Waa inaad bilowdid dhiig bax iyo casiraad muruqyo markaad qaadanayso kaniiniyada. Hubso inaad wada qaadato dhammaan 12 kaniin xitaa haddii aad dhiig baxdo kahor intaadan wada qaadin dhammaantood. Tixgelinnada Kale ee Ilmo Soo rididda Misoprostol: Baro waxa laga filan karo ka dib qaadashada misoprostol halkan. Haddii aad isticmaashay misoprostol, waxaa laga yaabaa inaadan u baahnayn inaad booqato bixiye daryeel caafimaad booqasho booqasho dabagal ah.
The National Abortion Federation NAF waa ururka xirfadleyda ah ee bixiyeyaasha ilmo iska soo ridka ee Waqooyiga Ameerika, iyo hoggaamiyaha udooda ilma iskasoo ridida sharciaga ah. Ipas waa hay'adda kaliya ee caalamiga ah oo si kali ah diirada saara balaarinta marin u helka ilmo iska soo ridka iyo daryeelka ka hortagga uurka. Tixraacyo: "Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. Second edition. Websaydhkani wuxuu u baahan karaa buskudyo qarsoodi ah iyo adeegyo dhinac saddexaad oo kala duwan inay si habboon u shaqeeyaan.
Markaad sii wadato adeegsiga degelkan waxaad na siineysaa ogolaanshahaaga inaad tan samayso.
Maqaarka qabow iyo qoyan Cadaadis dhiig oo sareeya Haddii aad leedahay mid ka mid ah astaamahan, ha ka waaban inaad dhaqso ugu tagtid dhakhtarkaaga sida ugu dhakhsaha badan. Cudurka Thromboembolic Samaysiga xinjirowga gudaha xididdada dhiigga oo gaari kara sambabaha ayaa sababa cudurka thromboembolic. Haweenka isticmaala ka hortagga uurka ee hormoonnada waxaa laga yaabaa inay 3 jeer ka sareeyaan khatarta ah inuu ku dhaco cudurkan; Dhinaca kale, haddii aad qaadato kiniin subaxdii kadib ah oo qaybteeda firfircoon ay tahay levenorgestrel, halista in laga cabsado aad ayey u yar tahay, sidaa darteed kaliya 20 haween ah kiiba XNUMX ayaa ku dhici doona.
Ka hortagga uurka Markii aan ka hadlayno daroogada sidoo kale waa inaan ka hadalnaa waxyaabaha ka hor imanaya. Kiniinka ka dambeeya subaxa dambe iyaga ayaa leh, iyo waa in maskaxda lagu hayaa si looga fogaado dhibaatooyinka ka dhasha. Suurtagalnimada in la sii wado isticmaalka kaniiniyada ka hortagga uurka. Wax saameyn ah kuma yeelaneyso bacriminta mustaqbalka fog. Dhibaatooyin Kaama ilaalinayo cudurada galmada lagu kala qaado.
Waa in lagu isticmaalo 72 saacadood gudahood galmada kadib, waxtarkeedu wuu sii yaraanayaa waqtiga. Talooyin kama dambeys ah Waa inaadan ka welwelin haddii daawada kadib aad caadadaadu u muuqato inay soo daahday ama hore.
Khaladaadyadan ayaa gebi ahaanba caadi ah, iyo rakaabka, sidaa darteed bisha xigta wax walba caadi ayey kusoo noqon doonaan. Haddii aakhirka aad uur yeelato, oo ay tahay uur la doonayo, kaniinku wax saameyn ah kuma yeelan doono uurjiifka. Waxaa intaa sii dheer, sidoo kale ma yareyn doonto helitaanka caanahaaga sidoo kale, markaa waxaad dib ugu laaban kartaa cabitaanka markii aad tixgeliso.
Haa, Kiniinka xakamaynta dhalmada kaa difaaci maayo cudurada galmada lagu kala qaado, sidaa darteed marwalba waa lagugula talinayaa isticmaalka kondhomka. Waa imisa qiimaha kiniinka subaxa ka dambeeya? Kiniinigaani wuxuu leeyahay qiimo ku dhow 20 euro. Waxaad ka iibsan kartaa farmashiyaha, in kastoo ay mudan tahay inaad aado rugtaada caafimaadka, maadaama ay halkaan ku taal meesha ay ku qori karaan taasna mahadsanid, qaddarka si weyn ayaa loo dhimi doonaa.
Marna xanuun ma leh inaad weydiiso dhakhtarkaaga talo. Sideed uqaadataa subaxa kiniinka kadib? Sida magaceedu muujinayo, subaxda ka dambeysa kaniiniga waa in la qaataa galmada galmada ka dib ama marka ilaalin noocaas ah aysan shaqeyn. Sida ugu dhakhsaha badan ee loo qaato, ayaa ka sii fiican. Laakiin weli, uma baahnid inaad sidoo kale kaa adkaato.
Maadaama aan heysano ilaa 72 saacadood xiriirka kadib. Iyada oo ku saleysan tirakoobka, way cadahay. Wax muhiim u ah tixgelinta, gaar ahaan markaan ku jirno maalmo ka hor ugxansidaha.
Dawadani waxay mararka qaarkood ku imaan kartaa weel laba-kiniini ah. Waxaad iyaga ka qaadan doontaa 12 saacadood oo kala fog. Hadaad adiguba waxay iibiyaan hal qaadasho, markaa way fududaan doontaa maadaama aad qaadanayso hal kiniin oo keliya.
Xusuusnow inay tahay hal qadar oo marwalba ay kafiican tahay in loo qaato sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si looga hortago. Xaashida kiniinka ee subaxa dambe Markaad shaki gasho, waxa fiican inaad u jeesato Xaashida kiniinka ee subaxa dambe.
Sidan oo kaliya, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad deganaan badan ka hesho, haddii aad qaadatay daawada ama haddii aad doonayso inaad sidaas sameyso. Waa maxay kiniinka ka hortagga uurka degdega ah? Waxaa jira dad ugu yeera subaxa kiniinka ka dambeeya ama kan kiniinka ka hortagga uurka degdega ah.
Laakiin sida magaceedaba ka muuqata, waxaa loo isticmaalaa oo keliya xaalad degdeg ah. Ilaa inta ay jirto khatar uur ah galmada kadib galmada. Sidaa darteed, way kufiican tahay kahortaga uurka aan loo baahnayn.
Waa in aan lagu khaldin kaniiniga sida ka-hortagga uurka. Maaddaama tan loo isticmaalo si joogto ah iyo kiniinka degdegga ah, kaliya xaalado gaar ah. Waad ku mahadsan tahay qaybaha sida Levonorgestrel, waxay ka hortageysaa ugxansidaha, laakiin iyada oo aan saameyn weyn ku yeelan jirka dumarka. Su'aalaha badanaa la waydiiyo Ma sameyn karaa galmo aan taxaddar lahayn ka dib markii aan qaato maalin dambe oo dambe? Waxa ugu fiican maahan. Mar labaad waxaan dhahaynaa markale waa in waqtiga la tixgeliyaa si kaniiniga maalinta ka dambeeya u leeyahay waxtarka lagama maarmaanka ah.
Taasi waa sababta haddii aan leenahay xiriir aan la ilaalin, sida ugu dhakhsaha badan aan u qaadan doonno kaniiniga. Haddii intaas ka dib iyo saacado ka dib ama maalmo, aan dib ugu laabanno xiriirno aan la ilaalin, lagaama ilaalin doono uur ku dhaca. Taasi waa sababta aad u galmoon karto laakiin aad isticmaasho kondhom si aan wax dhibaato ah u dhicin. Suurtagal ma tahay in la sameeyo kiniiniga guryaha lagu sameeyo oo subaxdii ka dib? Talo ahaan, waxaa fiican inaad aado rug caafimaad ama farmashiyaha kuugu dhow.
Sababtoo ah waxay mar walba kugula talin karaan si ka wanaagsan waxayna kuu sheegi doonaan sida iyo midka ay tahay inaad qaadato. Mawduuca daawooyinka iyo in ka badan hormoonnada kiiskan, had iyo jeer waa la doorbidaa inaan lagu ciyaarin.
Waa inaad taas ka fikirto hal kaniini-ka-dambeeya wuxuu la mid yahay afar ka mid ah kaniiniga caadiga ah. Waxaa jiray kiisas aad u daran oo maqnaanshaha subaxdii kiniinka ka dib, kuwii caadiga ahaa la qaatay.
Dabcan, waa inaad hubisaa inay ku jiraan maaddooyinka saxda ah iyo garaamyada. Wax aanan had iyo jeer ogaan doonin xaqiiqa ahaan. Marka, waan sii wadeynaa xulashada kiniinka degdegga ah oo aan deganaan badan yeelan doonnaa. Ma qaadan karaa subaxa ka dambeeya kaniiniga haddii aan qaadanayo maalin kasta ka hortagga uurka?
Xitaa haddii aad qaadanayso ka-hortagga uurka ee afka, haddii aad seegtay qaddar, markaa waad qaadan kartaa subaxa kiniinka ka dib. Haddii aad qaadatid kaniiniga maalin kasta, adigoon ilaawin wax kasta oo aad qaadato, markaa uma baahnid kiniinigaas maalin-dhaweyd. Laakiin dib ugu noqoshada kor ku xusan, haddii aad hilmaamtay tallaalkaaga, markaa waxaa la doorbidaa inaad doorato subaxa kiniinka kadib.
Ilaa ay imaaneyso caadadaada, waxaa ugu wanaagsan in cinjirka loo isticmaalo cilaaqaadkaaga oo aad balan la sameysid dhakhtarkaaga dumarka. Marar badan, waxaa lagugula talinayaa inaad sugto wareegga cusub si uu markale u bilaabo qaadashada ka hortagga uurka. Isaga kaliya ayaa xaqiijin doona. J Haa, markii caadadu timaado, waxaan iska hilmaami doonnaa uurka suurtogalka ah waxaana bilaabi doonnaa sidii caadiga ahayd. Suurtagal ma tahay in la qaato subaxda kiniinka ka dib laba jeer bishii? Haa, waa suurtagal laakiin laguma talinayo.
Marka ugu horeysa ee loogu talagalay qiyaasta sare ee hoormoonka taas oo aan ku ciqaabi doonno jirkeena iyo tan labaad, sababtoo ah waxay waayi kartaa waxtarkeeda. Jidhku wuu la qabsan doonaa haddii aan si joogto ah u qaadanno. Jidhkeenu waa kuwo caqli badan waxayna qaadan doontaa in muddo ah in gebi ahaanba laga takhaluso kaniiniga subaxa kadib. Marka wax layaab leh ma ahan in wax ka beddelka qaarkood ay ku dhici karto wareegga caadada.
Waxyaabo aan laga nixin laakiin ay tahay in lagu xisaabtamo. Sidee buu u shaqeeyaa kiniinka maalinlaha ah kadib Subaxda kiniinka ka dambeeya waxaa ku jira, waxyaabaha ay ka kooban tahay, Levonorgestrel 0. Waxay noqon doontaa dhismahan u shaqeeya sidii carqalad uur ka hortag ah. Taasi waa, way noqon doontaa joojinta ugxaanta sidaa darteed waxay ka hortagtaa ugxanta inay bacrimiso galmada galmada ka dib.
Taasi waa sababta ay lagama maarmaanka u tahay in sida ugu dhakhsaha badan loo qaato. Mar haddii aan qaadanno kaniiniga, wareeggayagu waa qasmay. Maadaama aysan ugxantu jirin, caadada waa la beddeli karaa.
Tani waa sababta daahitaanku u yahay wax caadi ah, laakiin ma ahan kiisaska oo dhan. Sidaan sifiican u ognahay, maydadka oo dhami isku si uma dhaqmaan. Marka, muddadu waxay kuu imaan kartaa maalinta saxda ah, ama kahor iyo kadib. Xusuusnow in aan qaadaneyno qadar aad u sarreeya oo hoormoonno ah. Haddii lafteeda, inta lagu jiro wareegga caadiga ah aan la kulanno isbeddello, markaan wax ka beddeleyno kuwan ayaa si aad ah loo ogaan karaa Haddii muddadu soo muuqan weydo laba toddobaad ka dib xilligeeda, markaa waa inaad qaadataa baaritaanka uurka.
Waxaan rajeyneynaa in hagahan uu kuu anfacay si aad wax badan uga barato habkan ka hortagga uurka ee caanka ah. Nuxurka maqaalka wuxuu u hogaansamayaa mabaadi'deena anshaxa tifaftirka.
Si aad u soo sheegto khalad guji Halkan. Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha » Xiriirka » Kiniinka ka hortagga uurka: faa'iidooyinka iyo khasaaraha faallooyin, ka tag taada Ka tag faalladaada cinwaanka email aan la daabacin doonaa.
Laakiin weli, uma baahnid inaad sidoo kale kaa adkaato. Maadaama aan heysano ilaa 72 saacadood xiriirka kadib.
Iyada oo ku saleysan tirakoobka, way cadahay. Wax muhiim u ah tixgelinta, gaar ahaan markaan ku jirno maalmo ka hor ugxansidaha. Dawadani waxay mararka qaarkood ku imaan kartaa weel laba-kiniini ah.
Waxaad iyaga ka qaadan doontaa 12 saacadood oo kala fog. Hadaad adiguba waxay iibiyaan hal qaadasho, markaa way fududaan doontaa maadaama aad qaadanayso hal kiniin oo keliya. Xusuusnow inay tahay hal qadar oo marwalba ay kafiican tahay in loo qaato sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si looga hortago. Xaashida kiniinka ee subaxa dambe Markaad shaki gasho, waxa fiican inaad u jeesato Xaashida kiniinka ee subaxa dambe.
Laakiin sida magaceedaba ka muuqata, waxaa loo isticmaalaa oo keliya xaalad degdeg ah. Ilaa inta ay jirto khatar uur ah galmada kadib galmada. Sidaa darteed, way kufiican tahay kahortaga uurka aan loo baahnayn. Waa in aan lagu khaldin kaniiniga sida ka-hortagga uurka. Maaddaama tan loo isticmaalo si joogto ah iyo kiniinka degdegga ah, kaliya xaalado gaar ah. Waad ku mahadsan tahay qaybaha sida Levonorgestrel, waxay ka hortageysaa ugxansidaha, laakiin iyada oo aan saameyn weyn ku yeelan jirka dumarka.
Su'aalaha badanaa la waydiiyo Ma sameyn karaa galmo aan taxaddar lahayn ka dib markii aan qaato maalin dambe oo dambe? Waxa ugu fiican maahan. Mar labaad waxaan dhahaynaa markale waa in waqtiga la tixgeliyaa si kaniiniga maalinta ka dambeeya u leeyahay waxtarka lagama maarmaanka ah.
Taasi waa sababta haddii aan leenahay xiriir aan la ilaalin, sida ugu dhakhsaha badan aan u qaadan doonno kaniiniga. Haddii intaas ka dib iyo saacado ka dib ama maalmo, aan dib ugu laabanno xiriirno aan la ilaalin, lagaama ilaalin doono uur ku dhaca.
Taasi waa sababta aad u galmoon karto laakiin aad isticmaasho kondhom si aan wax dhibaato ah u dhicin. Suurtagal ma tahay in la sameeyo kiniiniga guryaha lagu sameeyo oo subaxdii ka dib?
Talo ahaan, waxaa fiican inaad aado rug caafimaad ama farmashiyaha kuugu dhow. Sababtoo ah waxay mar walba kugula talin karaan si ka wanaagsan waxayna kuu sheegi doonaan sida iyo midka ay tahay inaad qaadato. Mawduuca daawooyinka iyo in ka badan hormoonnada kiiskan, had iyo jeer waa la doorbidaa inaan lagu ciyaarin.
Miyuu suurtagal ah in la isticmaalo shamacyada uurka? Marka loo eego tilmaamaha loogu talagalay isticmaalka Strepsils, waxaa loo isticmaali karaa xilliga uurka oo keliya haddii dhakhtarku ku raaco. Xaqiiqdu waxay tahay in kaniiniga ku jira kiniiniga flurbiprofen uu hoos u dhaco dhiigga nidaamka dhiigga wuxuuna u gali karaa nidaamka xuduudaha, si toos ah jidhka ilmaha.
Daawada waxaa loo qori karaa oo kaliya xaaladaha gaarka ah, oo leh xanuunka aan loo dulqaadan karin ee cunaha iyo hal mar. Waa in la ogaadaa in muddada gaaban waa inay ahaataa asbuuc. Sidaa darteed, inta lagu jiro uurka muddada 1aad iyo 3aad, Strepsils looma isticmaali karo.
Sida noocan ah ee daawada Strepsils, sida buufin, looma oggola xilliga uurka. In kasta oo xaqiiqda ah in ay u dhaqanto maxaliga, i.
Kaliya ee orofarynx, waxaa suurtagal ah in ay u isticmaalaan oo keliya marka ay tahay booska takhtarka hoos yimaada kormeerka dhakhtarka. Dhamaan haweenka xaaladdoodu tahay Strepsils?
Tixgelinnada Kale ee Ilmo Soo rididda Mifepristone iyo Misoprostol: Baro waxa lafilayo kadib qaadashada mifepristone iyo misoprostol halkan. Haddii aad la kulanto casiraad xun, ibuprofen waa daawo wanaagsan oo lagula tacaalo xanuunka.
Waxaad ka iibsan kartaa ibuprofen mg xoog miisaanka warqad dhakhtar la'aan inta badan wadamada. Qaado kiniinno ah mg midkiiba saacadood kasta.
Haddii aad u baahan tahay wax dheeraad ah oo ka mid ah xanuun joojinta, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa 2 kaniini oo ah Tylenol mg saacadood kasta. Haddii aad ka walaacsan tahay habka soo rididda ilmaha oo aad u baahan tahay taageero dheeri ah, waxaad kala xiriiri kartaa saaxiibbadayada www.
Daawooyinkani waa kuwo wax ku ool ah sidaa darteed Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa kugula taliyay inaad u baahan tahay inaad dabagal ku sameyso kaliya haddii: Waxaad dareemeysaa jirro, ama xanuunkaagu ma soo fiicnaanayo 2 ama 3 maalmood kadib. Haddii tani dhacdo, raadso daryeel caafimaad isla markaaba. Weli waxaad dareemaysaa astaamaha uurka laba toddobaad ka dib qaadashada kiniinka ilmo iska soo rididda.
Dhiigbaxaagu waa culus yahay oo ma khafiifayo ka dib 2 toddobaad. Haddii mifepristone aan laga heli karin goobtaada, waxaad isticmaali kartaa misoprostol kaligaa si aad u joojiso uurka. Ilmo soo rididda oo keliya misoprostol, waxaad u baahan doontaa inaad qaadato laba iyo toban mcg kaniin oo ah misoprostol. Acetaminophen iyo paracetamol uma shaqeeyaan si ay u maareeyaan xanuunka inta lagu jiro ilmo soo rididda sidaas darteed laguma talinayo.
Best smma courses
thoughts on “Kaniiniga uurka lagu qaado”
Samugar on Kaniiniga uurka lagu qaado